राष्ट्रिय – Page 185 – BIG FM 101.2 MHz
Home » राष्ट्रिय (page 185)
कांग्रेस एमालेलाई गलाएरै संयोजक बन्ने भए प्रचण्ड
काठमाडौं, असोज ८ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई गलाएरै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक बन्ने भएका छन्। विगतमा भएको सहमतिको तत्काल कार्यान्वयनको माग गर्दै गत भदौ १३ गतेदेखि बुधबारसम्म लगातार १३ दिन सदनको कारबाही अबरोध गरी सरकारलाई अप्ठयारा स्थितिमा पारेपछि सत्तारुढ संयन्त्रको संयोजक दिन बाध्य बन्दै गएका हुन्। लामो समय संसदको बैठक …
कहाँ छ न्याय ? न्याय दिन नसक्नेहरुले कस्तो संविधान बनाउलान् ?
– सञ्जीव शर्मा नन्दप्रसाद र गंगामाया अधिकारीलाई पहिलो पटक १० चैत २०६९ मा प्रधानमन्त्री निवासको पूर्वी गेटभन्दा उत्तरतर्फको सडक पेटीमा देखेको थिएँ । विरामीजस्ता बुढाबुढी चर्को घाममा लडिरहेको देखर सोधपुछ गर्दा नन्दप्रसादले आफ्नो दुखको पेटारो खोलेका थिए । उनीहरुको मुखमा अन्न नपरेको ४९ दिन भइसकेको रहेछ । “यो मुलुकमा न्याय पाउन गाह्रो भो बाबु”, गंगामायातर्फ संकेत गर्दै नन्दप्रासदले भनेका थिए, …
-कमल कोइराला मैले आफ्नो राजनीतिक यात्रा पुष्पलालको सानिध्यमा रहेर शुरु गरेँ । कोइराला परिवारबाट एक प्रकारले विद्रोह नै गरेर कम्युनिस्ट भएँ । मेरो संगत शुरुदेखि नै हाम्रा पारिवारिक नाताका मनमोहन अधिकारी, भरतमोहन अधिकारीहरुसँग भयो । त्यसैले हामी कम्युनिस्ट भयौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालसँग बनारसमा करिब सात वर्ष सँगै बसेँ । मैले पार्टी हेडक्वार्टरमै बसेर एसएलएम गरेँ । त्यसक्रममा …
काठमाण्डौ ७ असोज । नेपाली महिला तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकी अगुवा एवं एमाले नेतृ सहाना प्रधानको निधन भएको छ । तीन वर्षदेखि अस्वस्थ रहेकी ८७ वर्षिया प्रधानको गएराति ११ बजे काठमाण्डूको बयोधा अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो । श्रद्धाञ्जलीको लागि उनको पार्थिव शरीरलाई एमाले पार्टी कार्यालय बल्खुमा राखिएकोमा शवयात्रा सहित आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिने एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिए। …
३३२ दिनदेखि अनसनरत नन्दप्रसाद अधिकारीको निधन
काठमाडौं, ६ असोज । छोराका हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै ३३० दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका नन्दप्रसाद अधिकारीको सोमबार निधन भएको छ । अधिकारीको छोरा नूरप्रसादले शव नउठाउने घोषणा गरेका छन् । सरकारले अधिकारीको निधनलाई दुःखद भनेको छ भने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका छन् । वीर अस्पतालको आईसीयूमा उपचाररत ५४ वर्षका अधिकारीको सोमबार साँझ ५ बजे ३ मिनेट जाँदा निधन …
म ‘फेल’ भए एमाले र नेतृत्व लिन चाहने सबै युवा ‘फेल’ – उद्योगमन्त्री बस्नेत
रञ्जन अधिकारी पोखरा, ५ असोज / उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले आफ्नो पद समग्र युवाको प्रतिष्ठासँग जोडिएकाले आफूले थालेका अभियानलाई सफल पार्न सबै युवाको साथ समर्थन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले मन्त्रालय सम्हाल्ने क्रममा आफू फेल भए युवा संघ, एमालेका साथै मुलुकको नेतृत्व लिन चाहने सबै युवामाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने उल्लेख गरे । युवा संघ नेपाल, जिल्ला कमिटि कास्कीको आईतबार पोखरामा …
माथिल्लो कर्णालीको पीडीएमा हस्ताक्षर, नेपालले १२ प्रतिशत विद्युत र २७ प्रतिशत शेयर पाउने
काठमाडौं, ३ असोज / सरकारले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग परियोजनाको विकास सम्झौता (पीडीए) मा औपचारिक हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालमा उत्पादित विद्युतको बजारका लागि भारतसँगको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) पनि भइसकेकाले खासगरी जलविद्युतमा क्षेत्रका लगानीकर्तालाई सजिलो हुने । दुवै सम्झौतालाई सरकारले बिहीबार अनुमोदन गरेपछि लगानी बोर्डले जिएमआरसँग पीडीएमा शुक्रबार दिउँसो औपचारिक सम्झौता गरेको छ …
आफ्नै मन्त्रीसँग किन असन्तुष्ट बने प्रधानमन्त्री ? अर्जुननरसिंह केसीद्वारा मन्त्री पद अस्विकार
काठमाडौं, असोज – प्रधानमन्त्री भएको केहि महिना पछि सुशील कोइरालाले बालुवाटारमा पत्रकारहरुसंग आफ्नै मन्त्रीमण्डलको हाइफाइले दिक्क भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । हुन पनि कोइराला नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलले जनस्तरमा वावाहि कहिल्यै पाएन । उनको मन्त्रीमण्डलका एउटै पात्र त्यस्ता देखिएनन् जसका कारण कोइराला सरकारको हाईहाइ भएको होस् । आर्थिक चलखेल, तथा अपारदर्शिताका कारण उनको मन्त्रीमण्डल जनस्तरबाट मात्रै होइन आफ्नै पार्टी भित्रबाट समेत उल्टै …
झलनाथसँग किन मिलेन कुरा ?
-भीम आचार्य मन्त्रीबाट हटाइँदैछ भन्नेबारेमा मलाई केही जानकारी थिएन । एक्कासी यस्तो होला भन्ने पनि लागेको थिएन । तर, केही दिनदेखि असजिलो चाहि भइरहेको थियो । मन्त्रीबाट हटेको रिस पोख्यो भन्लान् भनेर मैले धेरै कुरा अझै पनि बोल्न चाहि रहेको छैन । केही सयमयता हाम्रो पार्टीका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनालसँग केही विषयमा कुरा मिलिरहेको थिएन । मैले सकेसम्म उहाँ (झलनाथ खनाल) ले …
भ्रष्टाचारीबाट अख्तियारले एक अर्ब असुल्दैछ : लोकमान, कुन-कुन मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार ?
काठमाडौं १ असोज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाबी गरेझैं विशेष अदालतबाट फैसला भयो भने एक वर्षको बीचमा अख्तियारले भ्रष्टाचारीहरुबाट १ अर्ब भन्दा बढी बिगो जरिवाना असुल गर्नेछ । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले आफू अख्तियारमा आइसकेपछि भ्रष्टाचारीहरुबाट ३५ करोड ७१ लाख बराबरको रकम असूल उपर गराएको जानकारी दिएका छन् । संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिलाई कार्कीले दिएको ५ पृष्ठ लामो …